प्रोटोटाइप मोल्ड निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन प्रोटोटाइप मोल्ड कारखाना
उच्च सटीक मोल्ड निर्माता
Yuanfang द्रुत प्रोटोटाइप मोल्ड र इंजेक्शन मोल्डिंग सेवाहरूको लागि तपाइँको एक स्टप पार्टनर हो
चीन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड बनाउने कम्पनीहरू
धेरै कम्पनीहरूले विभिन्न कारणका लागि प्रत्यक्ष निर्माण प्रक्रियामा जानु अघि प्रोटोटाइप मोल्ड प्रस्ताव गर्छन्।
यी कम लागत वाले मोल्डहरू हुन् जुन उत्पादन मोल्ड भन्दा सामान्यतया फरक हुन्छन् किनकि तिनीहरू अल्पकालीन प्रयोगका लागि मात्र हुन्।
प्रोटोटाइप मोल्ड भनेको के हो?
प्रोटोटाइप मोल्डहरू प्राय: उत्पादन मोल्डहरू भन्दा फरक हुन्छन् किनकि तिनीहरू प्रायः दीर्घकालीन प्रयोगको लागि लक्षित हुँदैनन्। एक उद्योग नेता को रूप मा, Yuanfang टेक्नोलोजी विशेषज्ञहरु छ जो कुनै पनि प्रकारको मोल्ड (प्रोटोटाइप सहित) लाई सम्हाल्न सक्दछ, धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्यहरुमा उच्च-गुणवत्ताको मोल्ड प्रदान गर्दछ।
प्रोटोटाइप मोल्डहरू किन?
उल्लेख गरिए अनुसार, प्रोटोटाइप मोल्डले अन्तिम उत्पादनहरू भन्दा फरक कार्य गर्दछ, निम्न उद्देश्यहरू सहित:
१. एक सस्तो प्रि-प्रोडक्शन मोल्ड जसले अन्तिम उत्पादन भन्दा पहिले मोल्डलाई परीक्षण गर्न मद्दत गर्दछ।
२. छोटो सीसा समय एक संस्करण छ कि परीक्षण गर्न सकिन्छ, सामान्यतया २--4 हप्ता लाग्छ।
प्रोटोटाइप मोल्डहरू अन्तिम संस्करणहरू हुन् भन्ने होइन, र यसको मतलब निर्माणमा चरणबद्ध दृष्टिकोण।
प्रोटोटाइप मोल्ड अन्तिम संस्करण होईन, तर चरणमा मोल्ड निर्माणको एक विधि। अन्तिम इंजेक्शन मोल्ड जस्तो नभई, प्रोटोटाइप मोल्ड कम महँगो सामग्रीबाट बनेको हुन्छ, जस्तै गैर-कठोर इस्पात, एल्युमिनियम वा पी २०। किनभने तिनीहरू अन्तिम इन्जेक्शन मोल्ड जत्तिकै शक्तिशाली छैनन्, तपाईं तिनीहरूलाई अन्तिम उत्पादनमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
प्रोटोटाइप मोल्डका के लाभहरू?
यदि तपाईंलाई विशिष्टता आवश्यकताहरू कसरी उत्तम रूपमा पूर्ण गर्ने भन्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न, वा अन्तिम उत्पादनको उपस्थितिको बारेमा निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाईं मोल्ड निर्माणमा जानु अघि प्रोटोटाइप मार्फत सजिलै प्रभावकारी र लागत प्रभावकारी मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै कम्पनीहरूलाई कसरी शुरु चरणमा नयाँ उत्पादनहरू विकास गर्ने भनेर निश्चित छैन। यस अवस्थामा, पूर्व-उत्पादन ईन्जेक्शन मोल्डले तपाईंलाई प्रभावकारी विधि निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ र जब तपाईं ड्रइंग बोर्डमा फिर्ता जान आवश्यक हुन्छ। किनकि तपाईं कम लागत सामग्री र छिटो प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो पूरा नगरी दबाब महसुस गर्नुहुन्न। चाहिन्छ।
उद्योगमा एक नेताको रूपमा, वाईएफ मोल्डसँग विशेषज्ञहरू छन् जसले प्रोटोटाइपहरू सहित कुनै पनि प्रकारको मोल्डलाई सम्हाल्न सक्छन्। हामी तपाईंलाई अन्तिम उत्पादनको लागि कुनै मोल्डमा प्रतिबद्ध गर्नु अघि एक कुशल र लागत-प्रभावी मूल्यांकन विकास गर्न मद्दत गर्दछौं। यो किन हामी मोल्ड निर्माण उद्योग मा एक नेता हो। यदि तपाईं प्रोटोटाइप प्लास्टिक मोल्डमा काम गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, स्वतन्त्र ईमेल वा हामीलाई तपाईंको अनुकूलन प्रोजेक्ट फोन गर्नुहोस्।
मोल्ड कारखाना, कस्टम मोल्ड, धातु सम्मिलितको साथ इंजेक्शन मोल्डिंग, प्रोटोटाइप मोल्ड निर्माताहरू, मोल्ड निर्माताहरू, प्लास्टिक घुसाउनुहोस्,